Hel talaal hadda! (Somali) - Mayor | seattle.gov
Dhammaan dadka deggan gobolka Washington iyadoon loo eegin xaaladda socdaal waxay heli karaan mid ka mid ah tallaallada COVID-19 oo BILAASH ah. Bulshada Madow waxay soo martay heerar aad u sareeya oo isbitaal dhigid iyo geeri ka timid COVID-19 ee degmada King. Si aad u daryeesho wanaaga qoyskaaga iyo kuwa aad jeceshahay, waa in aad is talaasho!
Helida Tallaalka COVID-19 ee Seattle
Deyrta iyo jiilaalkan, Magaalada Seattle waxay bilaabaysaa xarumo go'an iyo kooxaha guurguura si ay u taageeraan helidda tallaalka COVID-19 oo loo siman yahay, ammaan ah, oo lacag la'aan ah dhammaan gobolkeenna. Faahfaahinta oo ay ka mid tahay cidda xaqa u leh, goobaha, iyo diiwaangelinta ayaa hoos ku qoran.
Is -Talaal Maanta
Seattle waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Maraykanka ee dadkeeda is tallaaleen, iyadoo boqolkiiba 79 dadka deggan 12 iyo wixii ka weyn ay si buuxda isku talaaleen. Si kastaba ha ahaatee, markaan ku sii aadanahay dayrta iyo jiilaalka, Magaalada Seattle waxay dib u bilaabi doontaa dadaalkeedii tallaalka si loo hubiyo in si siman loo heli karo saddex kooxood oo muhiim ah:
Xubnaha bulshada ee aan la tallaalin, ayaa wajahaya halista ugu weyn ee isbitaal seexinta iyo dhimashada
Xubno bulshada oo u-qalma talaalka sadexaad oo qaatay tallaalka Pfizer
Carruurta da'doodu u dhaxayso 5-11 (SOO SOCOTA)
Habka ugu dhow ee naftaada iyo dadka aad jeceshahay looga badbaadin karo COVID-19 Delta kala duwanaanshuhu waa in la is tallaalo. Haddii aadan si buuxda u tallaalneen, samayso ballantaada maanta.
Deganeyaasha u baahan tarjumaada luqadda, caawinta helitaanka tallaalka ama goobta baaritaanka, ama hoyga ADA waxay wici karaan Xarunta Wacitaanka COVID-19 ee Degmada King kan 206-477-3977, oo furan maalin walba, 8 a.m. subaxnimo ilaa 7 p.m. fiidnimo.
U -qalmitaanka Xoojiyaha tallaalka Pfizer ee Hadda
Hadda, qayb kooban oo ka mid ah dadka qaatay tallaalka Pfizer ayaa u qalma tallaalka sadexaad. U -qalmitaanka talaalka sadexaad waxaa go'aamiyay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) iyo Xarumaha Xakamaynta & Ka -hortagga Cudurrada (CDC). Fadlan raac tilmaamaha federaalka oo raadi xoojiyaha tallaalka haddii aad u qalanto. CDC waxay hadda ku talineysaa in la kordhiyo qaadasha tallaalka sadexaad ee Pfizer dadka dhammaystay labadii cirbadood oo Pfizer ugu yaraan lix bilood ka hor oo ah:
65 iyo ka weyn
Dadka deegaanka xarumaha daryeelka muddada-dheer
50-64 sano jir kuwaas halis sare ugu jira maadaama xaalado caafimaad daro ay leeyihiin
Dadka soo socda ayaa laga yaabaa inay qaataan xoojiyaha tallaalka Pfizer ugu yaraan lix bilood ka dib markii horeba loo siiyay laba cirbadood oo tallaalka Pfizer ah oo ku salaysan faa'iidooyinkooda iyo khatartooda shaqsiyeed:
18-49 sano jir kuwaas oo halis sare ugu jira xaalado caafimaad daro ay leeyihiin
18-64 sano jir ah oo ku jira goobaha shaqada ama ka shaqeeya hay'adaha halis sare u ah soo-gaadhista COVID-19 (daryeelka caafimaadka, iskuulada, daryeelka carruurta, hoyga hoylaaweyaasha, xarumaha xabiska)
Waqtigaan, dadka helay Johnson & Johnson ama Moderna waa inaysan qaadan xoojinta tallaalka. FDA iyo CDC waxay sii wadaan inay dib u eegaan xogta si loo go'aamiyo in tallaalka sedexaad la siin karo dadweynaha inta badan.
Xarumaha Tallaalka Magaalada Seattle
Magaalada Seattle iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa iska kaashanaya marti-gelinta saddex xarumood oo tallaalka COVID-19 oo go'an oo ku yaal bartamaha Seattle, Koonfurta Seattle, iyo Galbeedka Seattle. Fadlan si taxaddar leh u fiiri macluumaadka hoose ka hor intaadan xarun kasta ka raadsan tallaalka.
Aqoonsiga iyo caymiska looma baahna si aad u qaadatid tallaalka COVID-19 xarun kasta oo ka tirsan Magaalada Seattle ama rug caafimaad. Haddii aad qaadanayso cirbadda labaad ama xoojiye Pfizer, fadlan soo qaado caddayntaada tallaalka.
Dadka soo galootiga aan sharciga haysan ayaa lagu tallaali karaa goob kasta oo tallaalka Seattle ah. Macluumaadkaaga caafimaad waa mid gaar ah, bixiyeyaasha tallaalkana lama wadaagi doonaan hay'adaha fulinta sharciga socdaalka ee federaalka.
Gaadiidka loo qaadanaayo Goobaha Tallaalka
Gaadiidka bilaashka ah ee lagu tago ama laga qaato goob kasta oo tallaalka waxaa bixiya Lyft iyo Hopelink Mobility (taleefan: 425-943-6706).
Daryeelka Carruurta ee Dadka La Tallaalayo
Xanaanada cunugga oo lacag la'aan ah ayaa diyaar u ah ballamaha tallaalka iyo ka soo kabashada KinderCare (taleefan: 1-866-337-3105), Kooxda Daryeelka Waxbarashada (taleefan: 1-833-459-3557), iyo YMCA (la xiriir YMCA-ga degaankaaga si aad wax dheeraad ah uga ogaato).
Xarunta Tallaalka Downtown Seattle - Furitaanka Oktoobar 23!
Goobta: Amazon Meeting Center, 2031 7 th Ave, Seattle, WA 98121
Saacadaha Shaqada: Sabtida iyo Axadaha, 9:30 subaxnimo - 3:30 galabnimo. Waxaa la bixiniyaa Tallaalka: Pfizer
Xarunta Tallaalka Koonfurta Seattle - Mar dhow ayay soo socotaa!
Xarunta Tallaalka Galbeedka Seattle - Dhawaan ayay soo socotaa!
Iska diiwaangali Talaalkaaga Maanta
Haddii aad raadinayso tallaalka koowaad ama labaad ee tallaalka COVID-19 ama aad u qalanto cirbadda xoojinta Pfizer, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad ballan ka samaysato xarunta Magaalada Seattle maanta adigoo adeegsanaya tixraaca hoose. Diiwaangelintu looma baahna, laakiin waxaa lagula talinayaa in la hubiyo in waayo -aragnimadaadu tahay mid sahlan oo degdeg ah intii suurtogal ah.
Ilo muhiim ah oo ku saabsan Baaritaanka COVID-19 iyo Tallaalkiisa
Goobaha Baarista COVID-19
Soo hel goobaha baaritaanka COVID-19 ee kuugu dhow. Iska baar haddii aad la kulantay qof qaba COVID-19 ama aad leedahay calaamadihiisa.
Macluumaadka Is go'daaminta iyo Karantiilka
Ka hel macluumaad ka socda Caafimaadka Dadweynaha-Seattle & King County wixii ku saabsan haddii aad la kulanto qof qaba ama laga helo cudurka COVID-19.
Ka hel ilaha tallaalka Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County, oo ay ku jiraan kaalmada daryeelka carruurta iyo gaadiid lacag la'aanta ah oo loogu talagalay goobaha tallaalka.
Rugta Tallaalka Bulshada
Ka hel rugaha caafimaadka talaalka ee bulshada ku salaysan wada-hawlgalayaasha aad ku kalsoon tahay ee xaafaddaada.
Xafiiska Socdaalka iyo Arrimaha Qaxootiga ee Magaaladu (OIRA) waxay iskaashi la samaysay kooxaha bulshada si ay u martigeliso khadad gargaar ah oo luqadeed oo taxane ah si ay uga jawaabaan su'aalaha iyo/ama u helaan fursadaha tallaalka dadka soo-galootiga ah iyo dadka qaxootiga ah ee xaddidan Ingiriisiga iyo/ama galaangalkoodu xaddidan yahay internetka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Khadka Gargaarka Bulshada ee Tallaalka OIRA ayaa laga heli karaa halkan.
Yaa heli kara tallaalka?
Gobolka Washington, dhammaan dadka jira 12 sano iyo wixii ka weyn waxay xaq u leeyihiin tallaalka COVID-19.
FADLAN OGOW: Tallaalka Pfizer waxaa loo oggol yahay carruurta da'doodu tahay 12 illaa 17 jir.
Xagee laga talaali karaa?
Ballan looma baahna. Inta badan farmashiyada, kiliinigyada, iyo xarumaha Caafimaadka Dadweynaha waxay hadda bixiyaan tallaalka COVID-19, ballan la'aan.
Adeegso WA Vaccine Locator tool ama eeg Sidee loo helaa macluumaadka tallaalka ee xulashooyinka hoose.
Deggeneyaashu waxay sidoo kale ballan uga dhigan karaan ballamo taleefan goob kasta oo ka mid ah iyagoo ka wacaya Somali Health Board (253) 317-3251 inta udhaxeysa Isniinta ilaa Khamiista, 9:00 am ilaa 5:00 pm.
Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan tallaalka COVID-19
Muhaajiriinta aan sharciyeysnayn waxaa lagu tallaali karaa iyada oo aan lahayn kaar aqoonsi meel kasta oo ka mid ah goobaha tallaalka ee Magaalada Seattle. Macluumaadkaaga caafimaad waa mid gaar ah mana la wadaagi doonaan bixiyeyaasha tallaalka hay'adaha fulinta socdaalka ee federaalka.
Baaritaanka iyo daaweynta korona fayraska (oo ay ku jiraan tallaalka) laguuguma xisaabi doono imtixaanka green card-ka looguu diidayo dadka qaata cayrta. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ayaa ka bixisay ogeysiis gaar ah oo arrintan ku saabsan. Dadka soogalootiga dhamaantood kuma qasbana inay maraan imtixaanka green card-ka looguu diidayo dadka qaata cayrta. Si aad wax badan uga barato, akhri Public Charge: Know Your Rights.
Ma jiro wax fayras ah oo ku jira tallaalka COVID, markaa kama qaadi kartid infekshinka COVID-19 tallaalka.
Maaddada muhiimka ah ee labada tallaal ee Pfizer iyo Moderna waa mRNA, taas oo u sheegaysa unugyadaada sida borotiin looga sameeyo coronavirus, taasoo u oggolaanaysa inay aqoonsato COVID-19 oo kaa ilaaliso infekshinka. Tallaalada sidoo kale waxay ka kooban yihiin dufan, cusbada, iyo sonkorta.
Maaddada muhiimka ah ee tallaalka Johnson & Johnson waa adenovirus 26, oo ah fayras aan waxyeello lahayn oo loo isticmaalo in lagu geeyo borotiinka kor u kaca ee korka coronavirus ku leh unugyadayada. Unugyada ayaa markaa aqoonsan kara COVID-19 waxayna kaa difaaci karaan infekshinka. Tallaalka Johnson & Johnson sidoo kale wuxuu ka kooban yahay liin dhanaanta iyo ethanol.
Tallaallada Pfizer iyo Moderna COVID-19 waxay u baahan yihiin laba qiyaasood, hal tallaal si ay u bilaabaan ilaalinta dhismaha iyo tallaalka labaad oo ah in la kordhiyo lana dhammaystiro ilaalinta. Markaad hesho tallaalka kuugu horreeya, takhtarkaaga tallaalka ayaa ku siin doon.
Tallaalka Johnson & Johnson wuxuu u baahan yahay keliya hal qiyaas.
Tallaalku wuxuu gacan ka geysan karaa ilaalinta odayaashayada. Sidoo kale, sida ugu dhakhsaha badan ee aan dhammaanteen u tallaalno, sida ugu dhakhsaha badan ayaan ugu laaban karnaa nolosheena qof ahaan.
Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah, booqo boggan Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County.